Daawo: Axmad madoobe oo Markii ugu horeysay Si Cad uga Horyimid Go’aanka Madasha iyo Kan Guddiga Xalinta Khilaafaadka – Kismaayo24 News Agency
Daawo: Axmad madoobe oo Markii ugu horeysay Si Cad uga Horyimid Go’aanka Madasha iyo Kan Guddiga Xalinta Khilaafaadka
by Tifaftiraha K24 3rd January 2017 036
Madaxweeynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Max’ed Islaam oo khudbad dheer oo uga hadlayay waxqabadka maamulkiisa ee sanaddii aynu kasoo gudubnay ka horjeedayay xubnaha golaha wasiirada Jubaland ayaa ka hadlay arimo ku saabsan kuraasta ay gudiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka ay shaaciyeen in si musuqmaasuq ah lagu soo doortay oo dib doorasho loogu celin doono.
Waxa uu sheegay in Jubaland ay ahayd dowlad goboleedka ugu khilaafaadka yar, islamarkaana lasoo celiyay hal kursi oo qura, isagoo xusay in wax lala yaabo ay tahay in la qeeybsado kuraas musuqmaasuq lagu soo eedeeyay oo qaar badan oo kamid ah ay madashu go’aan ku gaarto in sidoodii loo daayo.
“Waxaa laga hadlayay khilaafaad iyo kuraas lasoo celiyay, 20 iyo dhowr kursi baa lasoo celiyay, waxaa la yiri gudiga xallinta khilaafaadka baa 20-kaa kursi soo celiyay iyo beesha Caalamka oo laga qeeyliyay, oo la yiri musuqmaasuq baa ka dhacay, dil baa ka dhacay, Jubaland hal kursi baa laga soo celiyay 24-kii kursi ee lasoo celiyay,” ayuu madaxweeynuhu hadalkiisii raaciyay.
Madaxda madasha qaran ayuu madaxweeynuhu sheegay in arrinta kuraasta lasoo celiyay ay ka doodeen islamarkaana laga wada xaajoodeen sidii loo qeybsan lahaa kuraasta lasoo celiyay.
Axmad Madoobe Waxa yiri”Kuraastii waxaa la yiri halagu qeeybiyo deegaan, 4.5 mise maahane haloo qeeybiyo dowlad goboleedyada, xageen ku aragnay dambi la qeeybiyo.”
Waxa uu xusay in shirkii madasha lagu go’aamiyay in kuraasta lasoo celiyay min hal la siiyo dowlad goboleedyada, isagoo sheegay in ka Jubaland ahaan ay arintaasi kasoo horjeedaan.
“Inkastoo madasha aan ka maqnaa oo aan la xir-xiriirayay, hana mas’aladaasi waxa aan ku qanacsannahay maahan,” ayuu madaxweeynaha hadalkiisii raaciyay.
Waxa uu xusay in aysan ogolayn go’aankaasi, isagoo yiri “Jubaland hal kursi baa la soo celiyay, halkii kursi qeybtii dambiga la qeeybinayay baad ku yeelateen, sax maahan.”
Daawo: Jaaliyadda Jubbaland ee Dalka Norway oo u dabaal dagay Sanad-guuradii koowaad ee….
War cusub: Taliyaha Ciidamada Militariga Uganda General Katumba Wamala oo Booqasho qarsoodi ah ku yimid Magaalada….+Sawirro
Dhageeyso:-Cali Khaliif Galeeyr''Labo Jeer ayaan Dil ka Badbaaday''
admin 2nd August 2015 27th August 2015
Xog Culus: Dowladda Qadar oo cadaadiskii ugu xooganaay saareysa dowladda federaalka kadib markii ay….
admin 4th November 2017 4th November 2017
XOG: Maxaad kala socotaa khilaaf xoogan oo ka taagan magacaabista golaha wasiirada iyadoo madaxda dalka ugu sareyso ay….
Tifaftiraha K24 18th March 2017